Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguRon
I-chalet yethu yemveli ifumaneka eBelgian Ardennes embindini wokukhula kohlaza kwiinyanga zasehlotyeni okanye iipakethe ezishinyeneyo zekhephu ebusika. Ujikelezwe ngamanzi aphuma kumlambo oqukuqelayo egadini kunye namahlathi acwengileyo, uzibona ukwiqhekeza lendalo yokwenyani.
Xa ungena endlwini, ufumana into oyilindeleyo xa ucinga nge-fairytale chalet e-Ardennes. Ngesitovu esivuthayo phakathi, apho iisofa ezinkulu ezipholileyo kunye nezitulo ezilula ziye zasekwa. Omelele, iingcango zeplanga kunye neepaneli. Ukuzingela ngokudubula eludongeni kunye nekhitshi evulekileyo yaseBurgundi. Amagumbi okulala amabini aphezulu aneebhedi ezimbini kwaye ngalinye linesitya sayo sokuhlambela. Umbono osuka kumagumbi okulala umhle ngokumangalisayo. Kumgangatho ophantsi uya kufumana i-suite enobunewunewu eneminyango yepatio ekunika umbono omhle ngaphandle kunye negumbi lokulala elihle le-4 elinembono entle yendalo yasendle, nganye inesinki yokunethezeka. I-chalet ine-conservatory eyongezelelweyo enemibono evulekileyo ngaphandle apho ungaboni nto ngaphandle kweenkuni, amanzi kunye nesibhakabhaka. Endlini uya kufumana amagumbi amabini ezindlu zangasese kunye negumbi elibanzi, elahlukileyo leshawari / igumbi lomphunga elivela eCleopatra. Indlu ijikelezwe buhlaza. Ehlotyeni ungadla kwi-terrace kwaye unokuhamba ngqo kwigadi yabucala kunye nemisinga yayo eyahlukeneyo. I-chalet inemihlaba yayo ephangaleleyo emalunga ne-1200 yeemitha zesikwere kwaye iqukuqela kwindawo yolondolozo lwendalo enkulu ngendlela engenakulinganiswa.
Imilambo iAmbléve, iSteinbach kunye neWolfsbuch enkulu ikumgama wokuhamba, apho unokuqubha khona, i-kayak okanye iphenyane. Vala amehlo akho kwaye ungeva nto ngaphandle kwamanzi, iintaka, ngamanye amaxesha amaqakamba kwaye mhlawumbi nomlilo eziko. Nangona kunjalo ukule ndawo ingaqondakaliyo ngaphantsi kwemizuzu elishumi elinesihlanu yokuqhuba ukusuka kwidolophu epholileyo nedlamkileyo yaseMalmedy apho unokuthi, ukuba uyafuna, ujonge izihlwele. Kuhambo lwemizuzu emihlanu uya kufumana ilali yaseWaimes enevenkile enkulu, indawo yokubhaka entsha kunye nekhemesti.
Sisoloko sifumaneka ngexesha lokurenta.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Malmedy